ठमेल बजार गायिका मिना निरौला डाकै छोडी किन रोइन ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
काले दाई , ठमेल बजार , कान्छी मटयाङ टयाङ जस्ता गीत बाट चर्चाको शिखरमा रहेकि गायिका मिना निरौलाले बुधबार अलि फरक गीत रेकर्ड गरेकि छन । ‘सोंचे जस्तो कहाँ हुन्थ्यो सानै पिरले मान्छे डाकै छोडी किन रुन्थ्यो’ ? बोलको सेन्टिमेन्टल आधुनिक गीतमा मिनाले स्वर भरेकि हुन । प्रसिद्ध गीतकार लोकराज अधिकारी र प्रसिद्ध संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको संगीतमा स्वर भरेपछि मिनाले प्रतिकृया दिदै भनिन ‘आज अलि फरक र मिठो शब्द र मेलोडीको गीत गाउन पाए । सकेसम्म गीतलाई न्याय गर्ने कोशिष गरेकी छु । यो गीत बाट आशावादी पनि छु । फास्ट नम्बर हरु चलेका छन मेरा ।
तर सुगम संगीतमा सेन्टिमेन्टल गीत गाउने ईच्छा थियो यो गीतबाट त्यो ईच्छा केहि पुरा भएको छ । त्यसैगरी संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठले मिना संग पहिलो पटक गीतमा सहकार्य गरेको बताउदै सेन्टिमेन्टल गीतमा पनि मिना अत्यन्त फिट पाएको प्रतिकृया दिए । उनले ब्यबहारमा सरल र सहज अनि स्वरमा जुन स्ट्याण्र्ड हुनु पर्ने हो त्यो निरौलामा पाएको अनि गीत पनि राम्रो बनेको बताए ।
यो गीतमा गायक मानदेब ताजपुरिया र किशोर राजबंशी पुरुष आवाज भरेका छन । ताजपुरिया नेपाली गीत संगीतमा स्थापित भै सकेका गायक हुन भने राजबंशी यहि गीतमार्फत नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रबेश गर्दैछन । संगीतकार श्रेष्ठले नव प्रबेशी हुदाँ पनि राजबंशीमा गीत संगीत प्रतिको लगाव र आत्मबिश्वास बलियो देखेको बताए । उनले राजबंशीले गायनलाई निरन्तरता दिन सके अर्को फरक र राम्रो स्वर नेपाली संगीत क्षेत्रले पाउने बताए । सुदीप सागरले संगीत संयोजन गरेको गीतका रेकर्डिस्ट भोला पौडेल रहेका छन ।
पछिल्लो समय दुई नेपाली गीतले संगीत बजारलाई निकै ततायो । नेपाली चलचित्र ‘लुट–२’ चलचित्रको ‘ठमेल बजार’ र ‘पर्व’ चलचित्रको ‘कालेदाई’ले समक..